Ungazinakekela kanjani izandla nezinyawo zamadoda | Amadoda aSitayela
Ungazinakekela kanjani izandla nezinyawo zamadoda
U-Alicia tomero | | Izimonyo, Ukunakekelwa komuntu siqu, Ezempilo
Ukunakekelwa kwezinyawo nezandla emadodeni akuseyona into engafuneki kubantu abaningi. Kubonakale kuyinkinga yabesifazane, kepha sesiyakwazi lokho ukunakekelwa komzimba kwabesilisa abaningi kuza ukwengeza ukubukeka kwabo okuningi. Izandla cishe yinto yokuqala umuntu ayazisayo nokuthi azihlele, azinakekele ngokusikwa kwezipikili kuzonquma uhlobo oluningi lomuntu ozinakekelayo.
Kancane kancane, amadoda ayazuza ukunakekelwa kwawo futhi kunjalo into eyaziswa iso futhi ebenza bazizwe kahle ngabo. Ukugcina izandla nezinyawo zakho zilungiswe kahle kubalulekile ukwenza lokho kuhle. Sinikeze izeluleko mayelana unakekela kanjani izinwele, ungayithola kanjani intshebe enhle, futhi unikeze imibono emihle kakhulu ye- unakekele ubuso bamadoda. Manje amathiphu ethu amancane agxila kuwo ukuthi kufanele sinakekele kanjani izinyawo nezandla zethu.
1 Kungani kubalulekile ukunakekela izinyawo nezandla zakho?
2 Unakekelwa kanjani ngesandla
3 Imikhiqizo ye-hydration yesandla
4 Ukunakekelwa kwezinyawo
5 Imikhiqizo ye-foot hydration
Kungani kubalulekile ukunakekela izinyawo nezandla zakho?
Kubantu abaningi, ukunakekela le ngxenye yomzimba kubenza bazizwe bengcono kakhulu. Kuyohlale kunabantu abaningi ababongayo ukubona lapho umuntu enakekela ingxenye ebonakalayo njengezandla nenye ingxenye ukuthi ijwayele ukuguga kakhulu njengezinyawo.
Izinguquko zonyaka ngamazinga okushisa noma imisebenzi eyeqisayo behlupheka ngamanye amadoda, benza ukuwohloka okukhulu nokudabuka. Uyabona ezandleni zakho ukuthi bathola ukuhlupheka lokho kuqhekeka noma amanxeba abangela ukoma okukhulu. Izinyawo ngokushisa nazo zihlupheka kakhulu futhi zinesisindo esiningi.
Unakekelwa kanjani ngesandla
Amadoda amaningi vele babheja ngokuya endaweni yokucwala izinwele ukuze banakekele izandla zabo. Vele, ngaphakathi kwesandla sokunakekelwa ngeke sifake i-nail polish, yize kunamadoda amaningi asevele akhetha ukupenda izinzipho ngepolishi engenambala, elungisa. Endabeni yamacala lapho befuna ukucwebezela, bazokhetha imibala ekhethekile efana nomnyama, nsomi, luhlaza okwesibhakabhaka noma i-litmus.
Kuzoba ne- ukukhululwa ngokujula okuzosiza ukususa wonke amaseli afile futhi ususe amanye amakhanda amnyama uma kukhona. Uma kwenzeka ungasikholwa, lesi sinyathelo sisiza ukuvuselela isikhumba, ukusinikeza ukusha nokuthamba okuningi, umphumela uzobonwa
Kamuva kuzonqunywa izipikili, kwezinye izimo kungabusheleleka ngosizo lwefayela. Ama-cuticles azosuswa bese kufakwa uwoyela okuthambisa kuma-cuticles ukuzithambisa. Ekugcineni izogcina inikeze i-hydration enhle kakhulu ezandleni enezinto ezikhetheke kakhulu, eziphumulele, eziqabulayo futhi ezinikeza lawo manzi adingwa isikhumba kabi.
Imikhiqizo ye-hydration yesandla
Ukhilimu wesandla se-Roc unokwakheka okusiza ukubuyisa izandla ezomile, eyenzelwe ngokukhethekile ukuhlinzeka nge-hydration enkulu futhi ingezi igrisi ezandleni. Iyathulisa futhi igcine umswakama esikhunjeni futhi ikhonjisiwe kulezo zandla ezihluphekayo.
Ukhilimu wesandla sikaRickell Men ngomunye umkhiqizo uzikhathalela ngokujulile izandla zabantu. Iyakhanya futhi imunca ngokushesha futhi iqukethe uchungechunge lwezithako zemvelo ezinamathisela ngokujulile futhi ziqinise isikhumba.
Ukhilimu we-Ahava ukhilimu wamaminerali owenzelwe ukunakekela lezo zandla ezinganakwa yizimo zezulu ezeqile noma umsebenzi ophoqelelwe. Inamandla amakhulu okulungisa isikhumba esiqhekekile nesomile, sinikeza ukuguquguquka okukhulu.
Le ndawo futhi inokunakekelwa okukhethekile iningi lethu elikudingayo. Ezindaweni eziningi zobuhle sezivele ungaqala ngezinyawo ezimbalwa ofakwe emanzini cishe imizuzu engama-30 bese ulinda izimangaliso abangakunika zona.
Ingaqala ngokubhucungwa ngomusa nangokwehlisa umoya noma iphele ngakho, Ngeke kudingeke ukukhombisa izinyawo ezinhle, kepha umzimba nenhlalakahle yakho kuzokuthokozela lokho. Zonke izinzwane zizosikwa ukuze zinikeze ukubukeka okulungile nokuhlanzekile.
Njengoba kuyindawo evezwe isisindo esikhulu nokungcola njalo kuzokwenziwa umzamo wokuhlanza yonke iminonjana yokungcola lokho kungatholakala phakathi kwezipikili. Kuzoqhubeka futhi nquma zonke izikhumba ezingenzeka ezakha lezo cuticles lokho kunikeza lokho kubukeka okubi.
Isikhumba sonke esifile futhi ama-callus athile azosuswa futhi apholishwe kuze kube yilapho izinyawo zifinyelela kulokho bushelelezi ukuthi kuzokwaziswa kangakanani. Uchwepheshe angafaka ekugcineni, ama-gel namafutha athambisayo phakathi kwezinyawo namaqakala, into ezokwaziswa.
Imikhiqizo ye-foot hydration
I-Organic Shea Foot Cream yenziwa ngebhotela le-shea, uvithamini E, i-aloe vera namafutha we-marula ukulungisa izinyawo ngokujula. Ziyizithako ezibalulekile neziyiprimiyamu ezilungisa izingcingo ezomile neziqhekekile, izingcingo nezithende.
I-Neutrogena Ultra cream ethambisa umzimba yenzelwe ukunakekelwa kwezinyawo zamadoda. Isifanele ngisho nesikhumba esomile kakhulu ngoba izingxenye zaso ezisuselwa ku-glycerin ne-petroleum jelly zisiza ukunikeza lowo muzwa wokukhululeka okujulile. Iqukethe i-Allantoin, isithako esheshisa izinqubo zokuphulukisa zemvelo zesikhumba futhi sinikeze ukuthamba okweqile.
Konke lokhu kunakekela kuzosiza ukugcina ukubukeka okunempilo kakhulu, ukususa ingcindezi esikhunjeni, ukusifaka umoya-mpilo futhi kudale ukusakazeka okukhulu. Siyavuma ukuthi ukwenza lokhu kunakekela kuyindaba yokunakekela impilo yakho futhi nokusiza ukukhulisa imizwa yakho, uzokuthokozela.
Indlela ephelele ye-athikili: Amadoda aSitayela » Ukunakekelwa komuntu siqu » Ungazinakekela kanjani izandla nezinyawo zamadoda